Ka hel caawimaad bixinta Kirada | United Way of King County
Ka hel caawimaad bixinta Kirada
Haddii aad tahay degane King County oo dhaqaale ahaan saameyn ka soo gaartay COVID-19 oo aadan awoodin inaad kirada bixiso, waxaad uqalmi kartaa kaalmo maaliyadeed.
Lacagaha Waxaa loo kala heli doona sida lo kala horeeyo.
Fadlan u codso sida ugu dhaqsaha badan!
Waad dalban kartaa kaalmadan haddii:
Ku nooshahy degmada King County, WA
Mana Awoodid inaad bixiso kirada sababta oo ah COVID-19
Soo gala daqliga qoyska ee billaha ah oo ka hooseeya qaddarkan:
1 Qof: oo ka yar $ 3,483
2 Shakhsiyaad: oo ka yar $ 3,983
3 Shakhsiyaad: oo ka yar $ 4,479
4 Shakhsiyaad: oo ka yar $ 4,975
5 Shaqsiyaadka: ka yar $ 5,375
6 Shaqsiyaad: oo ka yar $ 5,775
Waxaad sidoo kale wici kartaa 2-1-1 oo aad weydiisan kartaa turjubaan.
Markaad wacdo 211, fadlan riix 5, ka dibna geli lambarkaaga 5-lambar ee ZIP koodka, ka dibna riix 1.
Waxaad la kulmi kartaa wakhtiyo sugitaan oo dheer. Way ka dhakhso badan tahay haddii aad ka hesho caawimaad buuxinta dalabka khadka tooska ah.
Hawl wadeennada 2-1-1 ayaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 8:00 AM ilaa 6:00 PM.